हामीले खेत नरोप्ने नै हो हाकिमसाप ? | Radio Langtang 90.3 Mhz
नुवाकोटको पुर्वी भेगमा रहेको सयौं रोपनीमा सिंचाई गरिदै आएको सिंचाई आयोजनाको नहर वाढीले वगाउंदा किसानहरु मर्कामा परेका छन् । लिखु गाउंपालिकामा आएको खहरेको बाढीले लब्धु–ढिकुरे–शेरा सिँचाई आयोजनाको पुल र नहर बगाउंदा स्थानीय सयौं किसान मर्कामा परेका छन् ।
वर्षात्संगै आएको बाढ़ीले लिखु गापा वडा नं. १ र २ जोड्ने नहरको पुल बगाएपछि सिंचाई अवरुद्ध भएको स्थानीय किसान क्षितिज थापामगरले वताउनुभयो । सो नहरबाट सिञ्चित सयौं हेक्टर जमीन अव बाझों बस्ने खतरा बढेको उहांको भनाई छ ।
सडक कार्यालय अन्तरगत ढिकुरे माझिपानी सडक खण्डमा एकबर्ष अगाडि देखि पुल बन्न लागेको थियो । पुल बनाउने क्रममा ग्राभेलहरु पुल नजिकै थुपारिएको थियो । थुपारेको ग्राभेलको कारणले सजिलै पानीको सतहले पुललाइ भेट्दा बाढि आएर पानीले नहरको पुल बगाएको स्थानीयवासीको भनाई छ । प्राय बाढी जाने ठाउँमा ग्राभेल थुप्रिदा पनि लब्धु–ढिकुरे–शेरा सिँचाई आयोजना जल उपभोक्ता समितिले आवाज नउठाएको स्थानीय किसानहरुको भनाई छ ।
साढे तीन करोड कार्यलयमै थन्कियो, हाकिम भन्छन्, ‘काम गर्न सकिएन ।’
पोष्टबहादुर बोगटीलाई यसरी सम्झियो माओवादीले
३० भदौ, नुवाकोट । दुई वर्षअघि निधन भएका पुर्वमन्त्री एवं तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटीको स्मृतिमा आज नुवाकोटमा ...
काठमाडौं – आइसिसी विश्वकप छनोटमा नेपालले आइतबार (आज) बाट घरेलु टोली जिम्बाब्वेविरुद्धको खेलबाट प्रतियोगिताको सुरुआत गर्नेछ । पहिलो खेलमै टेस्ट टोलीविरुद्ध उसैको घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने ...